သန်းဝင်းလှိုင် – ဦးသန်းရွှေ (သိ်ု့မဟုတ်) နေပြည်တော် မင်းသားကြီး | MoeMaKa Burmese News & Media
သန်းဝင်းလှိုင် – ဦးသန်းရွှေ (သိ်ု့မဟုတ်) နေပြည်တော် မင်းသားကြီး
ဦးသန်းရွှေ (သိ်ု့မဟုတ်) နေပြည်တော် မင်းသားကြီး
သန်းဝင်းလှိုင် ၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၄
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏အကြောင်းကိုရေးသားရသည်မှာမလွယ်ကူလှပေ။မြန်မာစာပေလောက ၌ သူ့ အကြောင်းတရားဝင် ရေးသားထုတ်ဝေသောစာအုပ်ဟူ၍မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်ပတ်သက်၍ The Irrawaddy အပတ်စဉ်ဂျာနယ် တည်ထောင်သူနှင့် အယ်ဒီတာချုပ် အောင်ဇော်ရေးသားခဲ့သော”အာဏာရှင်များနှင့်မြန်မာတပ်မတော်”အခန်းဆက်ဆောင်ပါးတွင်သာပါရှိသည်။
သို့ကလို ကျောင်းသားများ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသဖြင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက မခံမရပ် အုံကြွလာမည်ကို ရိပ်မိသွားသောကြောင့် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင် ဦးဘမော် ဥက္ကဌအဖြစ် ပါဝင်သော စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကော်မရှင်သည် (၁၂-၃-၈၈) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအချို့နှင့် ကြို့ကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်မှ လူထုအချို့တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကို စုံစမ်းတင်ပြရမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်ကောင်စီမှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၈၈) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ ထိုအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ထိုကော်မရှင်တွင် –
မေလ ၁၂ ရက်စွဲ တပ်ထားသော –
ယင်းနောက် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်လမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများသည် ရန်ကုန်မြို့လယ်သို့ ကြွေးကြော်သံများကို လုံထိန်းများက တားဆီးကာ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ရိုင်ဖယ်သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ကြသောကြောင့် ကျောင်းသားများက ခဲများ၊ ဂျင်ကလိများဖြင့် ပစ်ခတ်ကြကာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ပြည်သူ ၈ဝ ကျော်နှင့် လုံထိန်း ၂ဝ ခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့၌ အာဏာပိုင်တို့က လူစုဝေးခြင်းကို ရက်ပေါင်း ၆ဝ မျှ မပြုလုပ်ရန် ကြေညာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၌ ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ညနေ ၆ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအတွင်း အပြင်မထွက်ရ အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (၂) နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များမှ သင်တန်းအားလုံး ရပ်စဲလိုက်သည်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများသည် သမိုင်းဝင် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့ နေရာရွှေ့ပြောင်း၍ လူစုဝေးခြင်း မပြုရ ဟူသော ပိတ်ပင်တားမြစ်မှုကို ဖီဆန်ကာ သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ လူထုမငြိမ်သက်မှုများသည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မိုင် ၅၀ ခန့် ကွာဝေးသော ပဲခူးအထိ ပျံ့နှံ့သွားလေသည်။ ပဲခူး၌ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူ ၇၀ ကျော် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရသည်။ မော်လမြိုင်နှင့် ပြည်မြို့သို့လည်း ဆန္ဒပြမှုများ ပျံ့နှံ့သွားသည်။
သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်တွင် ဆန္ဒပြသူများက ဒေါက်တာမောင်မောင် သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးရန်နှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပရန်အတွက် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သြဂုတ် ၂၂ မှ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာ လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထွေထွေ သပိတ်ကြီးက အစိုးရနုတ်ထွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဟင်္သာတ၊ မုံရွာ၊ ရေဦး၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်၊ မကွေးနှင့် အထက်မြန်မာပြည် မြို့ကြီးများတွင်လည်း နေ့စဉ်လိုလို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထွေထွေသပိတ်ကြီးတွင် လူထုခြောက်သိန်းခန့် ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
4 Responses to သန်းဝင်းလှိုင် – ဦးသန်းရွှေ (သိ်ု့မဟုတ်) နေပြည်တော် မင်းသားကြီး
Ba Ba Gyi on April 17, 2014 at 5:31 am
ဦးသန်းရွှေအကြောင်းဆိုပြီးနိဒါန်းချီတာကဦးနေဝင်းအာဏာသိမ်းတာနဲ့စပြီး လျှာရှည်နေလိုက်တာ အခုထိ ဦးနေဝင်းတရားဝင်ထွက်ကြောင်းကြေညာတာ ဘာညာထက် ရှေ့မရောက်သေးပါလား။ ဇာတ်သာကရင်တော့ အနည်းဆုံးတပတ်လောက်ဆက်ကရမှာဘဲ။
kyawkyar on April 17, 2014 at 8:05 am
Great . Than Win Hlaing .. bery grief and concise and precise .
haha ‘ very brief, concise and precise ‘ !
mg wailinn on April 17, 2014 at 5:35 pm
kyawkyar on April 17, 2014 at 9:17 pm
Calm down, Phyay-Phyay pawt byar .
La-Phet kaung sar-chin Yin, Pa-Laung Taung-Tet Hnay-ya tae lay . ( not saying ‘ erection )
The crescendo will be coming ! This is just the entree.
Boom -Crash -Bang ..soh …….it will not be tasty.
(asaspokesperson of Than Win Hlaing )